NAIKA ELIANA : VOASAZY DAHOLO RAJOELINA SY NY FORONGONY FA NANONGAM-PANJAKANA – MyDago.com aime Madagascar
Ela ela ny Cst Naika Eliana no tsy tazana teny an-kianja. Misy antony hoy izy androany teny amin’ny Magro Behoririka satria matetika izahay rehefa miantso anay ny filoha Ravalomanana Marc ary namafisiny tamin’ny farany teo izany dia mananatra foana. Ianareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc miaradia maiko koa tandremo tsy handragitra ady, tsy hanao izao na izao. Inareo kosa no tokony hitondra fitoniana . Aleonay hoy Naika Eliana nangina kely. Nefa izaho miala tsiny aminao andriamatoa filoha ary mifona fa anisan’ny zavatra tokony tsy maintsy hovaliana amin’ireo mitondra ny fitoniana. Ireo olona ireo dia mody adala. Raha nihaino ny Tvplus ny tenako hoy izy omaly hariva dia niteny ilay mpanolontsaina juridique an’i Rajoelina milaza fa ny sadc no namoaka ny aministia ka tianareo Rajoelina no hamafa ny aministia ny filoha Ravalomanana Marc. Izaho tsy manaiky izany hoy Naika Eliana fa ny filoha Ravalomanana Marc no hamafa ny aministia an-dRajoelina. Misy ny atao hoe sata Afrikana hoy izy izay milaza hoe tsy misy tribonaly nanasazy azy. Anisan’ny tafiditra ao anatin’io sata io i Madagasikara. Milaza hoy Naika ny andininy faha 23 ao anatin’io sata io fa voasazy ireo. Richard Ravalomanana dia milaza fa tsy nisy miaramila voasazy teto. Voasazy koa anefa ny miaramila hoy izy ka mila aministia satria tafiditra ao amin’ny andininy faha 3 ao amin’io sata io. Ny filoha Ravalomanana Marc hoy Naika dia filoha faratampon’ny foloalindahy ka nialan’ireo miaramila izy fa nandray baiko tany amin’ny olon-kafa. Rajoelina sy ny forongony dia voasazy daholo satria nanongam-panjakana. Ny andininy faha 25. 4 dia milaza fa tsy mahazo milatsaka Rajoelina satria voasazy iraisam-pirenena. Miala teo i Maharanty hoy ity olomboantendry ity rehefa tsy mahafantatra ny lalàna iraisma-pirenena. Tsy misy zavatra noforonina izany fa mila aministia ireo olona ireo. Mbola be vava Maharanty hoy Naika Eliana hoe fiandrianam-pirenena. Izahay kosa hoy izy miteny fa vonona izahay hanaja manontolo ny tondrozotra ary vonona izahay handany ny lalàna momba ny aministia hivoahana amin’ny krizy. Saingy kosa hoy izy raha miadaladala ireo dia mangataka amin’ny iraisma-pirenena izahay avoahy ny sazy ho an’ny tsirairay, sambory, gadrao fa avy amin’ireo mihitsy no mampahantra ny vahoaka. Nilaza ny vondrona Eoropeana hoy Naika fa tsy mahazo ovana ny kalendrie fa aato izany ilay vola hanampiana amin’ny fifidianana ary ho rava ny andiany faha 10 amin’ny Fed. Mangataka izahay hoy izy sazy ho an’ny tsirairay ary mila aministia ireo olona ireo dia omenay fa izao kosa , maro ny zavatra nataon’ireo olona ireo teto, bois de rose, volamena, operation any Atsimo,26 janoary,07 febroary. Tsy manaiky isika vahoaka raha tsy tsaraina amin’izany izy ireo ka ho fantatsika ny hadisoana nataon’ireo tsirairay. Tsy maintsy giazana ny fananan’ireo any ivelany. Raha tsy manao izany isika hoy Naika dia misy manao ihany ireo. Tamin’ny taona 91 dia nisy nahazo trano be ireo fa amin’ity indray mitoraka ity kosa dia tsy avelantsika ho vita mora izany. Avereno daholo izay nangalarina rehetra. Any Morondava hoy izy dia misy trano lehibe ka ho alainay omena ny kamboty izany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 19 janvier 2013 19 janvier 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “NAIKA ELIANA : VOASAZY DAHOLO RAJOELINA SY NY FORONGONY FA NANONGAM-PANJAKANA”
19 janvier 2013 à 23 h 04 min
Manahfinaritra ny vao2 toy izao ary mahavelom-bolo,
mankasitraka Tompoko ary ho tanteraka daholo izao zavatra
lazaonao izao ka tsy hisy hivoana. Manantena valiny izahay Tompokovavy hajaina
ho ela velona , homba antsika Andriamanitra!!tsy ho very maina ireo rà latsaka.
20 janvier 2013 à 5 h 45 min
i Lalao ihany no irianay hitondra ny tany , fa ny ankoatr’izay zero manatody
AOKA RE ISIKA REHETRA MBA HITONDRA IREO OLONA IZAY AO ANATY FITONDRANA IREO NA DIA TSY ANKASITRAHANAREO SASANY AZA NY ISIANY MBA HITONDRA AZY IREO AMIM-BAVAKA SATRIA IZAO ANGAMBA NO LALANA TSY MAINTSY ALEHA – MAHAIZA MANDEFITRA SY MANGINA – TSY MISY ZAVA-BITA RAHA TSY MISY AZY IREO KOA – MAHATOKISA RE E
LA RECONCILIATION SERT QUI ? A QUOI SERT-IL DEVANT LES MISERES ET LES DOULEURS DES MALGACHES VICTIMES QUI RECLAMENT L’ACTION DE LA JUSTICE? SERT-ELLE A REDORER LA NOTORIETE DES OPPOSANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ? LA RECONCILIATION SERT-ELLE A BLANCHIR CEUX QUI ONT DE PRES OU DE LOIN ONT CONCONCTE ET ONT AIDE A LA REALISATION DU COUP D’ETAT ?
Précédent Article précédent : NANGATAKA AMINISTIA TAMIN’NY SADC I RAJOELINA
Suivant Article suivant : RAVELOSON CONSTANT : TSY MISY MANAIKY FIFIDIANANA ETO KA RAJOELINA NO HITANTANA NY VOLAM-PANJAKANA